पुस ११, २०७४ बुधवार ०१:२१:०० प्रकाशित
म ३१ वर्षको भएँ । मेरो बेला–बेला छाति दुखिरहन्छ । किन होला ?
कतिपय अवस्थामा मानिस सामान्य रहँदासमेत छाती दुख्ने गर्छ । यसरी दुख्नासाथ मानिसहरू मुटुसम्बन्धी रोग लागेको भन्दै चिकित्सककहाँ पुग्ने गर्छन् । तर, छाती दुख्नासाथ सबै दुखाई हृदयाघात र मुटु रोगका लक्षण नहुन पनि सक्छन् । कम उमेर अर्थात् ३०/३५ वर्षको समयमा छातीको दुखाई मुटुसम्बन्धी नभई अन्य कारण हुन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा ग्यास्ट्रिकका कारण छाती र पेटको बीच भागमा दुखेको हुन सक्छ । छाती दुखाई उमेर, बानी, अभ्यास, रिस्क फ्याक्टर जस्तै मधुमेह, कोलस्ट्रोल, उच्चरक्तचाप, कति समयदेखि दुखिरहेकोजस्ता कुराले निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भाइरसका कारण दुवै फोक्सोलाई असर गरी अक्सीजन लिने क्षमतामा कमी आउने एआरडीएस (एक्युट रेस्पिरेटोरी डिस्ट्रेस सिण्ड्रोम) हुनसक्छ । छाती दुख्ने अर्को कारण क्यान्सर पनि हुन सक्छ । नेपालमा फोक्सोको क्यान्सर धेरै नै छ । वीर अस्पतालमा मात्र हप्तामा ३÷४ जना फोक्सो क्यान्सरका नयाँ बिरामी पत्ता लाग्ने गरेको छ । यस्ता बिरामीको सुरुको अवस्थामा छाती नदुख्न पनि सक्छ । खकारमा रगत देखिनु, तौल घट्दै जानु र क्यान्सर रोगको लक्षण हुन सक्छ । क्षयरोगमा पनि छाती दुखाई हुन्छ । २ हप्तासम्म साँझपख ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, खकारमा रगत देखिने, विस्तारै तौल घट्दै जाने, खाना नरूच्ने क्षयरोगका लक्षण हुन् ।
डा. शितल अधिकारी